तातो चुस्कीसँगै शुरु हुन्छ, हाम्रो कफी गफ
गुलियो कफि, त्यसमाथि तिम्रो मिठो मुस्कान
कति आनन्दित छ यो पल !
शिशिर यामको घामभन्दा प्रिय लाग्छ
तातो कफी, अनि तिम्रो सामिप्यता
साँच्चै रोज्न गाह्रो छ !
हाम्रो गफ कहिल्यै टुङ्गिन मान्दैनन
समय बगिरहेछ, कफी सेलाउँदै जान्छ
कतै हाम्रो सम्बन्ध पनि चिसिने त होइन ?
तिमी छिट्टै सपना बुन्न थाल्छ्यौ
कति सम्भव छन्, कति असम्भव
अन्जान मै नटुटुन् तिम्रा सपनाहरु !
हतार नगर, अझ तिता यथार्थ सुनाउनु छ
अनि कयौँ घुट्की लिनै छन्
चिसो कफी अनि तिता स्वादहरु ।
Ashesh November 26, 2009 at 9:36 PM
गज्जव लाग्यो कविता ।
निकै राम्रो कविता । कफि सँगै जिवन सुरुवात अनि जीवन अन्त्य बिम्बले सबै कुरा बोलेको देखिन्छ ।
आकार जी, कहिलेकाँही तपाईको ब्लग खोल्नै गारो हुन्छ । जति कोशिस गरेपनि खुल्दै खुल्दैन । म त प्रभावित भएको छु । मेरो ब्लग लिष्टमा तपाईको अपडेट पोष्ट पि्रभियू देख्छु अनि तपाईको ब्लग खोल्छु तर खुल्दैन । किन यस्तो भएको होला । छिटै समाधान गनुहोला ।
Aakar November 27, 2009 at 7:03 AM
म पनि समाधान को खोजि मा चु, सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न गर्दैचु, तर पनि खै, के भइरेहको च, मैले थाहा पाउन सकेको छैन ।
Eternal November 28, 2009 at 9:36 AM
Sachai coffee guff yettikai ramailo huncha.... :)
Kabita sarai maan paryo ;)
mukunda bhandari November 28, 2009 at 2:51 PM
life ma coffee guff miss garnu hudaina hai.hehehehe
mukunda bhandari November 12, 2010 at 4:15 AM